Ukuthengisa kwi-Amazon yaseYurophu-Propars E-Export
Ukulawula iivenkile zaseAmazon eYurophu kulula ngePropars!
Qala ukuthengisa iimveliso zakho kumazwe ama-5 kwiAmazon Yurophu ngonqakrazo lweqhosha!
Kulula ukuthengisa kwiAmazon Yurophu ngePropars!
Ungazithengisa iimveliso ozongeza kwiPropars kwiAmazon Yurophu ngonqakrazo olunye.
Ii-odolo ezivela kwiAmazon Yurophu ziqokelelwa kwiscreen esinye nazo zonke ezinye iiodolo.
Ukuthengisa kwiAmazon Yurophu
Ukuqala i-e-export kunye nokuthengisa kwihlabathi kwi-intanethi kukuqonda okutsha kwezorhwebo kwixesha lethu. Kule ndawo; IAmazon ibonelela ngamathuba awodwa kumashishini ajonge ukuthengisa eYurophu. Elona qonga likhulu le-e-commerce kwihlabathi, iAmazon, ikwayinkokeli yemarike ye-e-commerce yaseYurophu.
Ngaphezu koko, le nkqubo ilula kakhulu kuzo zonke iinkalo, ngokuchasene noko umntu anokucinga. Ngokubhaliswa kwakho kwerhafu eTurkey, unokuvula ivenkile kwi-Amazon Europe kwaye uthengise ngeakhawunti enye kuwo onke amazwe apho iAmazon ikhona eYurophu. Unokuxhamla kwiinkqubo eziphambili kwiindawo ezifana nenkonzo yokuhlawula kunye nempahla.
700+ yezigidi zabaThengi abanokubakho kunye neAdvantageous Exchange Rates
Urhwebo lwe-E yinxalenye yobomi bomntu wonke eYurophu enabemi bebonke abantu abangaphezu kwezigidi ezingama-700. Ngaphezu koko, utyekelo lokuthenga imida enqamlezileyo luphezulu kakhulu. Namhlanje, ishishini elinevenkile eAmazon Yurophu linethuba lokuthengisa kuyo yonke iYurophu. Ngaphezu koko, unokonyusa inzuzo yakho ngokwenza ukuthengisa kwakho ngaphezulu kwe-euro kunye namaxabiso otshintshiselwano oluhle. Qonda abathengi abangakumbi kunye neentengiso ezinenzuzo ngakumbi ngeentengiso zakho ngaphezulu kwamaxabiso otshintshiselwano lwangaphandle!
Qala ukuthengisa kwiAmazon Europe ngePropar
Ukuthunyelwa ngaphandle kwe-E ukuya eYurophu ngoku kulula kakhulu ngokudityaniswa kwePropars yeAmazon! Nazi ezinye iingenelo zokusebenzisa iPropar;
Ungathengisa iimveliso ozithumele kwiphaneli yePropar ngobuninzi, kulo lonke elaseYurophu ngonqakrazo olunye.
Iimveliso ozigcinayo ngesiTurkey ziguqulelwa ngokuzenzekelayo kulwimi lwelizwe oza kulithengisa.
Izabelo zilandelelwa ngokuzenzekelayo kwinkqubo yePropar. Xa uthengisa, izitokhwe zakho kwiivenkile zazo zihlaziywa ngokuzenzekelayo.
Ungajonga kwaye ulawule iiodolo zakho kulo lonke elaseYurophu kwiscreen esifana nezinye iivenkile zakho.
Unokufumana inkxaso kwiqela lePropar kwizicwangciso ezisisiseko zentengiso eziza kukhawulezisa inkqubo yokuthengisa.
Kunye neePropar, unokukhetha eyona ndlela ifanelekileyo yokuthumela ngenqanawa yokuthunyelwa kwakho kwamanye amazwe. Ukuba ufuna ukusebenzisa inkqubo ye-FBA, unokufumana inkxaso yamahhala kulo mba.
Ukusekwa kweVenkile yaseAmazon yaseYurophu
Ukuba uthathe isigqibo sokuthengisa kwiAmazon Europe kodwa ungazi ukuba ungaqala njani, akukho maxhala! Iqela le-Propar lilawula inkqubo yokuseta ivenkile yenkampani yakho ekupheleni-ukuphela egameni lakho.
Konke okufuneka ukwenze kukufikelela kwiqela le-Propar kwaye ulungiselele amaxwebhu aceliweyo. Ngelixa uqhubeka nokulungiselela ukuthengisa, ivenkile yakho iya kuvulwa egameni lakho.
Unokuqhagamshelana nathi ngokukhawuleza ukuba uthengise kulo lonke elaseYurophu!